Mampihena lanja amin'ny fihinanana vary miaraka amin'ny akoho | Nutri Diet
La sakafo fihinanam-bary Izy io dia sakafo noforonina indrindra ho an'ireo olona mila lanja ireo kilao fanampiny izay manelingelina azy ireo. Fitsaboana tena tsotra entina manantanteraka izany, mifototra amin'ny fihinanana vary miaraka amin'ny akoho. Raha tena hentitra ianao dia hamela anao 2 kilao ao anatin'ny 8 andro.
Raha tapa-kevitra ny hanao an'ity sakafo ity ianao dia tsy maintsy salama ara-pahasalamana, misotro rano betsaka araka izay azo atao isan'andro, mihinam-bary ampangotrahana sy akoho voatono, tsiro ny fametahana anao amin'ny zava-mamy ary asio sira, fromazy mavo ary menaka oliva kely indrindra. Tsy maintsy averinao isan'andro ny takelaka voalaza etsy ambany izay anaovanao ilay drafitra.
2 Fa maninona no safidy tsara ny sakafom-bary akoho?
4 Isan'andro hanaovana ny sakafo
5 Afaka mampiasa vary volontany ve ianao?
6 Sakafom-bary sy akoho
7 Fomba fanaovana vary akoho
Sakafo maraina: dite 1 kaopy, yaourt skim kely 1, toast latabatra kely sy voankazo citrus 1.
Sakafo atoandro: vary misy akoho ary bolus na dite maitso 1 kapoaka. Afaka mihinana ny habetsaky ny vary miaraka amin'ny akoho tadiavinao ianao.
Snack: kafe 1 kaopy misy ronono, toast 2 feno voankazo ary voankazo citrus 2.
Sakafo hariva: lasopy legioma 1 kapoaka, vary akoho 1 lovia ary dite fotsy na mena 1 kaopy.
Alohan'ny hatoriana: paoma 1 na voahangy 1.
Etsy ambany no hahitanao menio 3 andro ho an'ny sakafo fihinanana vary sy akoho.
Fa maninona no safidy tsara ny sakafom-bary akoho?
Ny vary misy sakafon'ny akoho dia safidy tsara hafa hanaovana veloma ny kilao fanampiny. Izy io dia manana hetsika manadio, izay dia hahatonga antsika hahatsapa ho tsy be kibo. Etsy ankilany, raha misafidy vary volontsôkôlà isika, dia miatrika sakafo misy vitamina sy mineraly. Raha etsy an-danin'izany, ny akoho dia loharanom-proteinina fa ny antitra koa dia manana vitamina ao amin'ny vondrona B sy A.
Noho izany, rehefa atambatra ny vary sy ny akoho dia hanatevin-daharana ny roa isika gliosida toy ny proteinina, vitamina ary mineraly ilaina. Fifangaroana tsara dinihina. Fa eny, toy ny mahazatra amin'ny karazan-tsakafo ity, tsara kokoa ny tsy manalava azy ireo amin'ny fotoana maharitra ary manambatra azy ireo amin'ireo legioma hafahafa.
Fanatanjahantena: Tsy misy isalasalana fa ny vary dia iray amin'ireo foto-tsakafon'ny atleta. Izy io dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra ahazoana hozatra ary izany no mahatonga ny ankamaroan'ny bodybuilder miloka azy. Amin'ny maha-zava-misy azy lehibe dia manana maneziôma izy ary iray amin'ireo mineraly ilaina indrindra amin'ny atleta. Noho io sakafo io dia azonao atao mameno haingana kokoa ny fivarotana glycogen hozatra.
boky: Ny akoho sy ny vary no mifangaro tsara indrindra mahazo boky. Noho ny fanondroana glycemika an'ny vary dia ilaina alohan'ny fiofanana. Ny vary masaka dia hanome fibre 3% ary koa proteinina 7%.
hamaritra: Raha mahomby izy io ary koa hozatra, ny vary misy sakafon'ny akoho dia tonga lafatra ihany koa ho faritana. ny proteinina Izy ireo indray no fototry ny sakafo toy izany. Fa marina fa amin'ity dingana ity dia tsy maintsy atambatra ny sakafo miaraka amin'ny mazàna tsara natao hamaritana.
Sakafo bland: Rehefa miresaka momba ny sakafo malemy isika dia amina andian-tsakafo mora zahana izany. Hatramin'ny ankamaroan'ny tranga dia mihinana azy ireny isika rehefa manana karazana olana amin'ny fandevonan-kanina. Amin'izany fomba izany dia tsara ny maka ny vary masaka miaraka amin'ny akoho, mandritra ny roa na telo andro, ary avy eo mampiditra sakafo bebe kokoa.
Isan'andro hanaovana ny sakafo
Ny marina dia miovaova ny sakafo amin'ny sakafo toa izao. Mihoatra noho ny zavatra rehetra satria hiankina amin'ny fampihetseham-batana ananantsika hatrany izany. Mba hisorohana ny fisakafoanana kely foana eo anelanelan'ny sakafo dia afaka manampy vary kely kokoa isika, satria fantatsika fa mahavoky izany. Misy ny olona manana vary 40 grama sy akoho 100 grama hanana mihoatra ny ampy hanampiana ny sakafo lehibe tsirairay. Saingy araka ny lazainay dia azonao ampitomboina kely kokoa ny habetsaky ny vary.
Afaka mampiasa vary volontany ve ianao?
Ny marina dia torohevitra tsara ihany koa. Hatramin'ny vary volontany manohana ny fihenan'ny lanja ary loharano fibre lehibe. Saingy tsy izany ihany, fa manana antioxidant koa izy, manan-karena mineraly ary manome antsika ny hery ilaina ihany koa hahafahantsika miatrika fihinanam-bary misy akoho toa an'ity.
Sakafom-bary sy akoho
Sakafo maraina: vary ampangotrahina anaty rano ary nokapohina voankazo vaovao
Mamatonalina: yaorta voajanahary
Sakafo atoandro: Vary mena misy salady ary tratra akoho voatono
Sakafo hariva: lasopy misy legioma sy akoho
Sakafo maraina: dite, toast varety manontolo ary yaourt
Mamatonalina: voankazo citrus roa
Sakafo: vary miaraka amin'ny akoho sy legioma sautéed
Sakafo hariva: lasopy legioma sy vary akoho
Sakafo maraina: kafe irery na misy ronono an-tsokosoko, yaorta voajanahary ary mofo grama 30 grama
Mamatonalina: voankazo roa vaovao
Sakafo atoandro: Salady misy menaka oliva, vary nahandro ary ronono misy tratra akoho voatetika
Azonao atao ny mamerina ireo andro ireo mandra-pahatapitry ny herinandro. Raha antoandro dia somary noana ianao dia tsara kokoa ny mifidy legioma na voankazo. Aza adino fa tokony misotro rano be ianao ary azonao atao ho fampidirana azy. Raha te-hanitra ny loviao ianao dia safidio ny zava-maniry manitra ho fanampin-javatra lehibe.
Fomba fanaovana vary akoho
Raha mahandro vary volontany ianao, dia asaina avela hilona minitra vitsy mialoha. Avy eo isika dia handraho azy ary hametraka vary eran-kapoaka ho an'ny rano telo. Etsy ankilany, ny tratran'ny akoho no hena natolotra ho an'ity karazan-tsakafo ity izay tiantsika hihena. Lavorary miaraka amin'ny vary masaka sy masaka, izay hahazoantsika tsiro bebe kokoa. Afaka ataontsika arotsaho amin'ny zava-manitra na anana manitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Mampihena lanja amin'ny fihinanana vary akoho
runny dia hoy izy:
Mamaly an'i corry
Ajacinty dia hoy izy:
Toa sakafo mety amiko izany ary tsy ho noana ianao ...
Mamaly an'i Ajacinty
Misifu-fu dia hoy izy:
mifanaraka amin'ny diabeta ve izany?
Mamaly an'i Misifu-fu
PMIJK dia hoy izy:
Tsy maintsy nataoko hatramin'ny 4 taona ka hatramin'ny 9 taona izany noho ny olana ara-pahasalamana. Ary namboarina io. Ny hany sakafo azoko nohanina dia… ..amin'ny maraina, ronono amandy, akoho natsatsika na nahandro vary tamin'ny maraina, ary mitovy amin'ny sakafo hariva. Ka mandritra ny 5 taona. Saingy efa nolazaiko fa noho ny olana ara-pahasalamana izany.
Ary aiza ireo proteinina? Amin'ny maha-mpahay sakafo mahavelom-bolo ahy dia tsy tiako ity sakafo ity, afaka mampihena ny lanjanao ianao fa mety ho very ny hozatra ary ho vatana tsy dia tsara tarehy loatra
Mamaly an'i ivan
harlequin dia hoy izy:
Ry lehilahy, raha dinihina fa ny akoho dia manana proteinina 20g isaky ny vokatra 100g ary ny vary volontsôkôlà manodidina ny 8g isaky ny 100g, sakafo 3 izay misy 100g fotsiny ny akora tsirairay avy dia efa manome proteinina 84g isan'andro. Raha manisa ireo yaourt sy ronono dia mihoatra ny 100g ny proteinina no entinay isan'andro. Betsaka noho ny tsy ampy ... Faha-mpihinan-kanina xd
Mamaly an'i harlequin